China AD01-2 CBD / THC alahlwayo Vape Pen Manufacturer Ceramic Coil No Heavy Metal with Pure Taste and Big Vapor ifektri abakhiqizi | I-Alphagreen vape
I-AD01-2 CBD / iTHC elahlwayo yeVape Pen Umkhiqizi we-Ceramic Coil Ayikho Insimbi Esindayo ene-Pure Taste ne-Big Vapor
Sakha futhi sinikeze i-AD01-2 CBD / iTHC ipeni le-vape elahlwayo elinamandla angama-200k ngenyanga, lihlala lizinzile futhi lithola ukubuyiselwa okuhle okuningi. Sisebenzisane nenkampani ethile ye-BIG enamalayisense e-BIG iminyaka, ehlanganisa iningi lezimakethe zaseNyakatho Melika naseYurophu. Silindele ukuba ngumlingani wakho wesikhathi eside e-China
Ikhoyili: Ikhoyili ye-Ceramic
Ukwenza kusebenze: Adonse umoya
Imbobo: 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm
Izinto: Hola Mahhala, NO Heavy Metal
1. Ukwethulwa Komkhiqizo we AD01-2 CBD / iTHC alahlwayo Vape Ipeni
AD01-2 CBD / iTHC alahlwayo vape ipeni ingenye ethandwa kakhulu futhi uzinzile alahlwayo vape ipeni, futhi kubuye ipeni endala futhi zakudala enkampanini yethu.
Yenziwe ngothangi wengilazi ithiphu yobumba, ithusi elingenamthofu, nokotini webanga eliphakeme. Izinga lokumunca uwoyela eliphezulu linikeza isipiliyoni se-vape ebushelelezi.
Ibhethri esisebenzisa ibhetri ebangeni elinamandla we-400mAh, lanele ngokuphelele ukuvota uwoyela owodwa wegremu, ngisho no-3 gram. Ngakho-ke akumoshi amafutha akho.
Kepha futhi sinohlobo olushajekayo lwe-AD01-2 elisendalini. Ibhethri lingu-320mAh, kepha sengeza imbobo evuselelekayo phansi kwaleli peni le-vape. Ingakusekela ukugcwalisa uwoyela nevape kaningana.
Ngaphezu kwalokho, ngoba i-AD01-2 yakhelwe ngamandla we-3.6V okukhipha, amandla we-8W kanye ne-cartridge engu-1.4Ω, singathola umusi omkhulu lapho sivutha.
Mayelana nokuhlolwa: Ngakunye kokulahlwayo esizokwenza ukuhlolwa, mayelana nokubukeka, umthamo webhethri, ibhethri eliguga, ukumelana negobolondo. Sizothumela kuphela imikhiqizo ngemuva kokuthi yonke inqubo iphelele. Sizokwenza isiqiniseko ngamunye alahlwayo vape ipeni sithumela umkhiqizo omuhle. Akukho ukwehluleka.
2. Ipharamitha Yomkhiqizo (Ukucaciswa) kwe- AD01-2 CBD / iTHC alahlwayo Vape Ipeni
I-CBD / iTHC igobolondo le-vape / AT01
3. Isici somkhiqizo nokusetshenziswa kwe AD01-2 CBD / iTHC alahlwayo Vape Ipeni
——400mAh ibhethri lomthamo omkhulu, elanele igremu elilodwa.
4. Imininingwane Yokukhiqiza ye- AD01-2 CBD / iTHC alahlwayo Vape Ipeni
No Ayikho nhlobo insimbi esindayo, ithiphu ehlukile yokukhetha. (I-Ceramic, ingilazi, ipulasitiki, ukhuni, insimbi)
Type Uhlobo olulahlwayo, alukho ichweba leshaja.
1. Kulula ukuphatha: Ama-e-cigarettes alahlwayo awadingi ukuvuselelwa futhi awadingi ukushintshwa. Ababhemayo badinga kuphela ukuphatha i-e-cigarette ukuphuma ngaphandle kwesidingo sokuphatha amashaja asindayo nezinye izesekeli.
2. Ukusebenza okuzinzile ngokwengeziwe: Ngenxa yomklamo ovaleke ngokuphelele kagwayi olahlwayo osebenza nge-elekthronikhi, ukulandelana kokusebenza kokushaja nokufaka ama-cartridges esikhundleni kuncishisiwe, okunciphisa ukwenzeka kwamaphutha. Osikilidi bakagesi abangavuseleleka abakwazi ukuxazulula inkinga yokwehluleka kwesifunda nokuvuza koketshezi. Lokhu kuxazululwe ngokuphelele ngogwayi abalahlwayo abasebenza ngogesi.
3. Ama-e-cigarettes amaningi: Umthamo wama-e-cigarettes alahlwayo ungafinyelela izikhathi eziphindwe ka-5 kuya kweziyi-8 zika-e-cigaretti egcwalisekayo, engashintshwa ngama-e-cigarettes alahlwayo.
4. Ibhethri eliqinile: Ngokuvamile osikilidi bakagesi abangagcwaliseka kabusha, igobolondo ngalinye lidinga ukukhokhiswa okungenani kanye, futhi ukusebenza kwebhethri kuphansi kakhulu, okulingana nokushaja kanye kuyo yonke imidanso engu-5-8 ebhemayo. Futhi uma i-e-cigarette evuselelekayo ingasetshenziswanga, i-e-cigarette ayisakwazi ukusetshenziswa cishe ezinyangeni ezimbili. Lokho kwehlukile. Ibhethri elahlwayo le-e-cigarette linamandla futhi lingaxhasa osikilidi abajwayelekile abangaphezu kwama-40. Futhi uma i-e-cigarette elahlwayo ishiywe ingasetshenziswanga, empeleni ngeke ithinte ukusetshenziswa kwebhethri le-e-cigarette kungakapheli unyaka owodwa, futhi kungakapheli iminyaka emibili, umthelela ebhethri ngeke weqe ku-10%.
Langaphambilini I-G5 CBD / iTHC Amafutha Alahlwayo I-Vape Cartridge Icindezelwe ku-Lead Mahhala Umkhiqizi Wepulasitiki Ayikho Insimbi Esindayo enokuNambitha Okumsulwa ne-Big Vapor
Olandelayo: I-400mAh AB03 Ibhethri 510 Intambo Idizayini Eyingqayizivele noMkhiqizi Wensimbi Wensimbi I-Grade Auto-Draw Inhalation Activation Special Air Flow Hole, Efanelekela i-Universal 510 Cartridge
alahlwayo vape ipeni 0.5ml
© Copyright - 2010-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, elishajekayo vape ipeni, ibhethri vape ipeni, 510 ibhethri, cbd vape ipeni, alahlwayo vape ipeni, CBD uwoyela vape alahlwayo, Yonke Imikhiqizo